LG's V10 dia tsy mandrefy raha resaka bateria Androidsis
Manuel Ramirez | | bateria, LG, About us
Omaly izahay dia naneho hevitra momba ny fanjifana tafahoatra ny iray amin'ireo fampiharana izay ampiasain'ny mpampiasa indrindra. Ny app Facebook no meloka fa mihena be ny fahombiazan'ny telefaona sy ny bateria, ka mila mieritreritra tokoa raha ilaina ny mametraka azy. Misy vahaolana vitsivitsy toy izany mampiasa ny fitetezana Chrome, izay ao amin'ny kinova finday dia miasa toy ny manintona hifandraisana amin'ireo namantsika na fianakaviantsika amin'ny alàlan'ity tambajotra sosialy ity. Olana iray hafa ananan'ny mpampiasa ny manana terminal izay tsy mahita noho ny toetra teknika sasany ny fifandanjana tonga lafatra amin'ny fanjifana sahaza amin'ny bateria anananao.
Iray amin'ireo smartphone na tablette ireo ny vao nivoaka LG V10. Terminal iray izay tsy ampoizina amin'ny toetra sasany toa ny izay tontonana faharoa izay eo an-tampony amin'ny efijery lehibe sy izay, tsy vitan'ny fakan-tsary iray anoloana, fa roa. Filokana lehibe nataon'ny mpanamboatra Koreana amin'ny telefaona 5,7-inch miaraka amin'ny efijery Quad HD miaraka amina puce Snapdragon 808, izay manome fiainana ireo fizotrany rehetra ireo hiasa tanteraka amin'ity smartphone ity izay nahagaga tanteraka. Ny sembana lehibe sy tokana ananany dia ny faharetan'ny fiainana bateria, iray amin'ireo ratsy indrindra amin'ireo telefaona izay manana efijery lehibe.
1 Bateria izay zara raha misy
2 Mandalo ny fitsapana
Bateria izay zara raha misy
Tsy dia miteny aho na inona na inona, satria raha ampitahaintsika amin'ny an'ny smartphone hafa toa ny Xperia Z3 compact, manalavitra be ny zavatra azony izany amin'ity telefaona ity ihany. Avy amin'ny Phone Arena dia nisy andiana fitsapana maro izay nanamarina izay hevitr'ireo mpampiasa maro momba an'ity telefaona ity izay misy andiana pitsopitsony ao amin'ny fitaovana, mahavariana tokoa.
Fampisehoana QuadHD 5,7-inch ary tontonana faharoa ho an'ny fampandrenesana mitondra antsika mivantana any amin'ny smartphone izay mitaky ny azy manokana avy amin'ny bateria 3.000 mAh. Ny vahaolana avo kokoa, ny efijery lehibe ary ny faharoa dia mitarika antsika amin'ireo fitsapana ireo izay nahitana fa tsy mitondra tena araka ny antenaina ny V10.
Efa fantatray ny isan'ny mpampiasa azy aleon'izy ireo manana terminal izay afaka mandany ny andro mihoatra ny ampy, toy izay manana ny puce tsara indrindra, ny RAM lehibe indrindra na ny écran misy vahaolana 4K. Ny Galaxy S6 an'ny Samsung manokana dia manana olana amin'ny bateria amin'ny alàlan'ny fampiasana hery fanampiny ho an'ny tontolon'ny fampandrenesana ary ny famahana ny QuadHD.
Mandalo ny fitsapana
Ao anatin'ny fitsapana natao dia apetraka ny batterie V10 toy ny ratsy indrindra amin'ireo telefaona lehibe indrindra eo amin'ny efijery. Ity tranonkala ity dia nandalo script manokana izay maka tahaka ny fampiasana androm-piainana mahazatra mba handrefesana ny fahombiazan'ny bateria mba hifanaraka amin'ny fepetra mitovy. 200 niveau no napetraka tamin'ireo finday avo lenta samihafa izay notsapaina. Amin'ny fitsapana dia mandeha hatrany ny script miaraka amin'ny efijery terminal mandra-pahafatiny farany.
Ny LG V10 dia nahazo vitsivitsy Adiny 5 sy 51 minitra iainana bateria, ambany noho ny telefaona hafa toy ny Samsung's Galaxy Note 5 na Apple iPhone 6S Plus. Ireo roa ireo dia nahazo 9 ora sy 11 minitra roa, izay 3 ora sy sasany katroka lava noho ny telefaona vaovao an'ny LG.
Ny iray amin'ireo angona mahaliana amin'ireo fitsapana ireo dia ny ataon'ny LG V10 nanome valiny tena tsara tamin'ny famahanana haingana miaraka amin'ny 65 minitra hamitana azy io, raha 5 kosa ny Note 81 ary hatramin'ny 165 minitra i Apple. Araka ny azonao nolazaina fa tsy misy ny fahavoazana izay tsy tonga, na dia tsy manamboatra ny olana ananan'i LG izao aza io phablet io izay nahazo ny fotoana ratsy indrindra tamin'ireo terminal voasedra ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » Ny androm-piainan'ny LG V10 dia iray amin'ireo ratsy indrindra amin'ireo finday fantatra amin'ny hoe phablets.
Jose chan dia hoy izy:
Eny ???? Tsy fantany
Valiny tamin'i Jose Chan
Efijery 5 ora ??
Valiny tamin'i Angel Gonzalez
5 ora mandra-pahafatin'ny telefaona rehefa mampiasa ny script test miaraka amin'ny efijery amin'ny fotoana rehetra.
Sergio Guerrero Lopez sary placeholder dia hoy izy:
Noheveriko fa ny finday avo lenta amin'ny taona
Valiny tamin'i Sergio Guerrero Lopez
Efijery 5 ora ?? Fotoana be dia be izany, amin'ny andro mba tsy misy olona manana ny telefaon'izy ireo miaraka amin'ny efijery mandritra ny 5 ora, raha tsy miara-miasa aminy foana ianao na xD kamo, ny telefaona manome 3 ora dia efa tsara ary 4 mahatalanjona (afa-tsy ratsy izany hoy aho)
Gonzalo CN dia hoy izy:
Mahaliana sy liana izaitsizy fa ny heverina ho faharetan'ny bateria dia miavaka amin'ny lohatenin'ny fanamarihana fa tsy ny fiampangana haingana izay entiny miovaova be amin'ny terminal hafa. Mandehana !!!
Valiny tamin'i Gonzalo CN
Speedometer dia hoy izy:
Na dia marina aza fa maharitra kely ny bateria dia tsy manonona ny tombony amin'ny famoahana haingana izy ireo ary (farafaharatsiny any Mexico) dia misy bateria fanampiny hanakalo azy.
Valiny tamin'i Tacho
JaimeH dia hoy izy:
Tsy misy isalasalana fa ny bateria ratsy indrindra. Heveriko fa ny LGv10 dia tsy mety amin'ny fampiasana matihanina. Any Mexico dia manome anao bateria ho fanomezana izy ireo satria i LG mihevitra fa amin'ny antenatenan'ny andro dia ho 15% ianao. Tsy misy olona mimenomenona fa rehefa voadidy haingana ny telefaona ary terena ianao hanao antso mihoatra ny 5 minitra dia mihamafana hatrany amin'ny mahasosotra tokoa ny mitazona izany ao anaty sofinao. Raha tianao haharitra ny bateria ary tsy ho mafana dia ataovy izao: Esory ny efijery faharoa, aza mampiasa Wi-Fi, aza mampiasa ny fampiharana facebook ary mainka ny fampiharana twitter, esory ireo fampiharana mandeha ao aoriana ary avy eo dia hanana telefaona finday ianao izay ho tonga amin'ny enina tolakandro io.
Mamaly an'i JaimeH